Penicillin, Viagra Iyo LSD: 3 Daawooyinka Shilalka ee Shilalka ah • Dawooyinka Inc.eu
Penicillin, Viagra iyo LSD: 3 Soo Saarista Farmashiyaha Oo Shilku Abuuray
Guul darradu had iyo jeer ma keento guul. Si kastaba ha noqotee, guuldarradu waxay ku shaqeysaa siyaabo badan oo dahsoon oo inta badan horseedda xigmad iyo hodan ka badan guusha. Tan waxaa ka mid ah microwave, brandy, Teflon iyo xitaa buskudka shukulaatada. Maqaalkan, waxaan ku eegi doonnaa seddex "fuck-ups" (haddii aad rabto inaad ugu yeerto taas), daahfurnaanta dawooyinka ee horseeday cilmi baaris dheeri ah, ama lagu iibiyey daawooyinka waaweyn ee tafaariiqda, ama ugu yaraan aad u ruxday saynisyahano leh khiyaano lama filaan ah oo ku saabsan warshadaha dawooyinka:
1 Dhibaatooyinka caaryada
2 Saraawiil dharbaaxo leh
3 Sawirro fantastik ah, qaabab iyo laad qosol ah
In kasta oo maqaallo cilmiyaysan oo hore ay soo jeediyeen fikradda ah in fangaska iyo bakteeriyadu ay dagaallo epic ah iskula jiraan, haddana waxay ahayd Dr. Alexander Fleming oo isagu isagoon ogayn uu kubbadda ku rogrogay oo tijaabiyey aragtidan 1928-kii.
Khabiir ku takhasusay cilmiga bakteeriyada oo ka shaqeynayay Isbitaalka St. Mary ee ku yaal London ayaa soo laabtay fasaxii xagaaga ee uu ku joogay Scotland, kaliya wuxuu helay dhibaato jahwareer iyo caaryar oo ka soo baxda qaar ka mid ah suxuunta Petri ee uu kaga tagay shaybaarkiisa.
Xaqiiqdii, gumeysi "Staphylococcus Aureus" (bakteeriyo xun, xun oo keenta cuduro badan) waxaa hareeyay fungus loo yaqaan "Penicillium Notatum". Ka dib markii si dhakhso leh loo eegay mikroskoobka, Fleming wuxuu ogaaday in fangaska uu ka hortagayo koritaanka cudurka. Kadib markuu si ula kac ah ugu celceliyay shilkan dhowr jeer, wuxuu si guul leh u xaqiijiyay daahfurkaan.
“Markii aan soo toosay ka dib markii ay qorraxdu soo baxday bishii Sebtember 28, 1928, xaqiiqdii ma aanan dooneynin inaan wax ka beddelo dhammaan daawooyinka anigoo ogaanaya antibiyootigga ama bakteeriyada ugu horreysa adduunka. Laakiin waxaan u maleynayaa inay taasi sax tahay wixii aan sameeyay. ”
Maaddaama Alexander uu ku dhowaa inuu howlgab noqdo oo uusan haysan awood uu ku sooco maaddada aasaasiga ah, qaar ka mid ah cilmi-baarayaasha kale waxay sii wadeen inay tijaabiyaan oo ay horumariyaan badeecada ugu dambeysa ee aan wada ognahay: Penicline, oo la dhammaystiray ka dib 14 sano oo tijaabo ah. .
Ugu dambeyn, Dr. Alexander Fleming waxaa la gudoonsiiyey abaalmarinta Nobel Prize sanadkii 1945 daahfurkiisii, iyadoo aan horay looga sii digin in talaabadan cusub ee caafimaad ay soo saari karto iska caabin ka hortaga jeermiska (taas oo ah dhibaatada hada bulshada ku dhex jirta).
Saraawiil dharbaaxo leh
Markii kalkaaliye caafimaad ay tijaabisay bukaannada dawada cusub ee Pfizer dhammaadkii XNUMX-yadii, waxay heshay wax aan caadi ahayn. Qaar ka mid ah waxay kujireen calooshooda waxayna lahaayeen ceeb aan yareyn ...
Waxay si dhakhso leh u ogaatay in bukaanno badan ay kacsan yihiin.
Kadib baaritaano dhowr ah oo lagu guuleystey oo ku saabsan xayawaanka isla markaana la caddeeyey inaysan jirin wax saameyn ah oo labaad, shirkadda Pfizer waxay go'aansatay inay tijaabiso walaxda Sildenafil ee bini-aadamka, oo ah walxo rajo leh oo ballaarin kara xididdada dhiigga ee wadnaha iyadoo xannibaysa borotiinka PDE-5. daaweynta dhibaatooyinka wadnaha iyo xididdada. Laakiin sida muuqata Sildenafil wuxuu go'aansaday inuu ballaariyo qaybaha kale ee marinnada dhiigga ee jirka ...
Waxay sii wadeen tijaabinta tabaruceyaal badan waxayna heleen natiijo isku mid ah. Waxay ahayd markaa agaasimihii cilmi baarista Pfizer, Ian Osterloh iyo kooxdiisii, waxay go'aansadeen inay horay usocdaan oo ay arkaan meesha daahfurkaan geyn doono. Maadaama dhibaatooyinka wadnaha iyo xididada ee dawadan cusub wax yar uun la xaliyay, waxay doorteen inay diirada saaraan duuliyaha cusub daaweynta xanuunka erectile.
"Waan la yaabay sida qofkasta markii cilmibaaristeyda ku saabsan daaweynta suurtagalka ah ee cudurka wadnaha ay shaaca ka qaadday saameyn dhinaca caafimaadka ah oo kacdoon ku ah caafimaadka galmada." - Dr. Ian Osterloh
Xanta ku saabsan daawadan cusub ayaa si lama filaan ah u faaftay, taasoo ka dhalatay waraaqo ka yimid bukaanjiifka itaalka daran oo sharaxaya halganka iyo cawaaqibka ku noolaanshaha cillad kacsi: jahwareerka, ceebta, saameynta cilaaqaadkooda iyo sida ay ugu quusteen daaweynta wax ku oolka ah.
Surwaal waalan Viagra darteed? Mid ka mid ah daahfurka dawooyinka ee ikhtiraacay shil. (afb.)
Waraaqahaani waxay ku qanciyeen Pfizer inuu horay u sii wado baaritaanka isla markaana uu sare u qaado hanaanka qaaliga ah iyo dheer ee qaadashada shatiga.
Viagra waxaa si rasmi ah loo bilaabay 1998 wuxuuna caawiyay qiyaastii 20 milyan oo qof 62kii sano ee la soo dhaafay. Ilaa sanadkii hore, maxaa yeelay shatiga Pfizer wuxuu dhacay 2020. (Erections la Qiimeyn Karo Qof Walba, Haa!)
Sawirro fantastik ah, qaabab iyo laad qosol ah
Qarniyadii dhexe, dadka ku nool Yurub waxay sii wadeen dhimashadooda ergotism (sidoo kale loo yaqaan 'St. Anthony's Fire'): Qallal, addimo dhaca, waallida, iyo dhalanteedyo ayaa ahaa calaamadaha ugu waaweyn ee dhimashada. Ergot, oo ah fangas laga helay galleyda, ayaa sababay cudurkan aadka u xun.
In kasta oo ay u muuqan karto wax xun, dadku si dhakhso leh ayey u ogaadeen in ergot ay daawo weyn u tahay joojinta dhiig-baxa dhalmada ka dib iyo hab weyn oo foosha dhaliya.
Saameyntan wanaagsan ee naxariis-darrada leh ee ku saabsan wakiilkan ba'an ayaa ku dhiirrigelisay Professor Arthur Stoll inuu go'doomiyo maaddada firfircoon ee uu rumeysan yahay inay kicin karto habdhiska neefsashada iyo wareegga dhiigga.
Sanado kadib, Stoll wuxuu sameeyay sheybaar u gaar ah wuxuuna shaqaaleeyay Albert Hoffman, oo markaa sii waday howlgalka Stoll. Kadib jahwareer iyo geeddi socod dheer oo nadiifin ah iyo waxyaabo badan oo ka mid ah waxyaabaha la soo saaray (oo aanan sharxi doonin maadaama aynaan aqoonyahanno ahayn), Hoffman (isku daygiisii ​​25aad) wuxuu helay walax la yiraahdo LSD-25 (lysergic acid diethylamide).
Maadadan ayaa loogu talagalay in lagu kiciyo wareegga dhiigga, laakiin waxay keentay in yar oo jiir ah oo lab ah oo dabeecad iyo dhaq-dhaqaaq badan, taasoo keentay in Mr. Hoffman uu meel dhigo cilmi-baarista muddo 5 sano ah, laakiin ay ka dhigto inuu ka fikiro natiijada.
Sannadkii 1943, oo ay horseed ka ahayd xiisaha, Hoffman ayaa qirtay LSD Fursad weyn oo 26aad, oo isku dayday in alaabada mar labaad la soo saaro, markan waa inuu joojiyaa dawakhaad qariib ah iyo dareen aan joogsi lahayn, oo ay ku xigto "uumi aan kala go 'lahayn oo sawirro fantastik ah, qaabab aan caadi ahayn oo leh xoog, kaleidoscopic ciyaar midabbo leh. “
Ma dooran LSD, LSD ayaa heshay oo ila soo hadashay. - Dr. Albert Hoffman
Dhowr maalmood ka dib, si geesinimo leh (ama laga yaabee doqon) isku day ah in la duubo khibrada, Hoffman (4: 20 pm!) Wuxuu liqay qiyaas la xakameeyay oo ah LSD-25 wuxuuna diiwaan galiyay waxyaabihii uu soo ogaaday: dawakhaad, riyooyinka, iyo baahi aan la xakamayn karin qosol
Daahfurka kadib, Dr. Hoffman wuxuu dib ugulaabtay gurigiisa baaskiilkiisa, taas oo aakhirkii noqotay taariikh caan ku ah dadka jecel LSD: the Maalinta Baaskiilka!
Intii lagu baaray daaweynta niyad-jabka iyo walwalka, cudurka qandhada ee LSD ayaa qarxay 60-yadii, isagoo ahaa maado qosol badan oo waqti kula qaadata asxaabta, Hoffman wuxuu markhaati ka ahaa jinni-siinta iyo mamnuucaya walaxdiisa inay dawo caafimaad u noqoto UN-ka iyo Mareykanka.
Awoodda LSD ee ujeeddooyinka daawada weli si buuxda looma oga. Laakiin waxa hubaal ah in qosol badani ka dhex muuqday daahfurkaan.
Marka… maxaan baranay? Ha ka baqin qalad, isku day 25 jeer haddii loo baahdo, waxaa laga yaabaa inaadan helin waxa aad filayso. Markaan guuldarraysanno, fursadaha xiisaha leh iyo helitaannada ayaa naloo sheegi karaa iyaga!
Ilaha ay ka mid yihiin Evergreen (EN), FuckUpNights (EN), NCBI (EN), NRC (NL), Sababta (EN)
Mas'uuliyiinta California waxay heleen oo burburiyeen $ 1 bilyan oo digaag dhirta marijuana
Tilmaam ku saabsan wax soosaarka sharci darrada ah ee sharci darrada ah ayaa u horseeday cilmi baarayaasha California meelaha dhirta marijuana. Qiyaastii 10 ...
Hogaamiye ka socda suuqa xashiishka ee soo ifbaxaya istiraatiijiyad ahaan loogu talagalay ballaarinta. Sida hal-abuurnimo, toosan isku dhafan iyo ...
Waqtigee ayuu xilli-ciyaareedka Narcos Mexico 2 ka muuqan doonaa Netflix?
Narcos waa mid ka mid ah taxanaha daawooyinka ugu caansan adduunka. Waxaan haynaa war wanaagsan. Riwaayadda ka ganacsiga daroogada ayaa sii socota ...